Apple inowedzera kugona kweiyo iPad Mhepo 2 uye Mini | Ndinobva mac
Apple inowedzera kugona kweiyo iPad Air 2 uye Mini
Yakafananidzwa | | iPad
Isu takafunga kuti vaizoibvisa pamusika uye voburitsa Air 3 kana kuita chimwe chinhu chine hukama nayo. Gadziriso yechigadzirwa chakadai haina kupembedzwa. Iko hakuna nhau dzinogona kuunzwa pasina kufukidza kana kupfuura iyo iPad Pro, saka Apple haigone kumutsiridza iyo Mhepo renji yemapiritsi ayo. Izvi zviri izvo, ivo vaifanirwa kuenda kune rimwe zano: Mira, kurudzira uye kuvandudza, pasina kugadzirisa.
Iyo iPad Air 2 chigadzirwa chiri kusaririra kumashure uye chinofanira kuenda? Kwete uye chiuru zvakapetwa kwete. Nzira chete yekuti izonyangarika ndeye kutora Mhepo 3 kana zvimwe zvakafanana. Kana pasina munhu anotsiva iwe nekufananidza nekuvandudza ako maratidziro, hauzonyangarika. Izvo zvakaitwa naApple kwave kuri kuzvichengeta sezvazviri asi kuwedzera simba rekuchengetedza uchichengetedza kana kugadzirisa mutengo. Ivo havachave zvakare 16 kana 64Gb. Kunyatsoteerera kune nhau.
1 IPad Mhepo 2 uye Mini Wedzera Simba
2 IPads ndiyo ramangwana reApple
IPad Mhepo 2 uye Mini Wedzera Simba
Ndiri kutarisa iyi positi pane 9,7-inch Mhepo nhanho, iyo isiri iyo chete yandinayo, asi ini ndinoiona seye inokwezva kune vashandisi uye yakakosha. Asi, nekuti zvese zvine asi asi, hazvisi izvo chete zvinokanganisirwa neaya mashoko akanaka. Apple yasarudzawo kugadzirisa iyo Mini Mini 4 Uye iwe unogona kutotaura kuti zvakare iyo Mini 2, iyo iwe yaunongowana chete mune 32Gb sarudzo ye € 289, Kana yako ari madiki maPads uye akagadziridzwa kuti uatore neruoko rumwe uye uatakure sekunge yaive smartphone, ipapo unogona tsvaga iyo Mini Mini 4 ine 32Gb kana 128Gb ye € 429 kana € 539. Chinhu chinosekesa hukama hwayo neiyo Air renji.
Kunyatsoteerera, nekuti iyo 2Gb kana 32Gb iPad Air 128 inodhura zvakafanana neiyo Mini 4. Kunyangwe saizi iri 9,7 inches kana 7,9 ichakubhadharira zvakafanana. Kunyanya, Apple? Iyi ndiyo nzira yaunofunga kuti mapiritsi ako akakosha here? Icho chokwadi chekuti vane iwo mutengo mumwe chete chakaratidzika kuva chakasimba kwazvo kwandiri. Kwete nekuti Mhepo yakachipa, asi nekuti iyo mini inodhura. Ehe, inofanirwa kutakurwa mupfungwa kuti ine yakawanda kwazvo huwandu hwekuchengetedza.
Panzvimbo pekunyunyuta pamusoro pemutengo weMini, ndichafara kuti Mhepo haina kukwira futi, asi kuti yasara nemutengo unokwezva uye wakanaka. Iyo tariro kuti haasi ese mahwendefa eApple anodarika € 650, sezvazvakaitika nePro renji, kwatinofanira kuwedzera zvimwe. Ose keyboard uye Apple Penzura. Nekuti kubva paunotenga Pro iwe unoitora nezvose.
IPads ndiyo ramangwana reApple
Zvishoma nezvishoma ivo vanowedzera yavo yekuchengetedza uye yavo maratidziro. Nzira yayo ndeyekutsiva komputa, iyo PC, uye kunyangwe iyo Macbook. Mune izvi, sezvazvakaitika neiyo iPhone, ivo vaona kuti 16Gb uye 64 masimba eanoperevedza hongu kana hongu. 32 zvakare iri mari, asi seyakaderera hunyanzvi haina kushata. Iyo inogara iri nani pane 16. Uye kwe € 110 zvimwe, iwe svetukira ku128Gb. Ndokureva, iwe unoipeta nekana. Ndezvipi zvimwe zvaungade?
Apple inogutsikana kuti ramangwana rekambani iri muhwendefa. Pane iyo iPad, ingave iri pro, mini kana kunzi Pepe kana Juan. Makomputa achatengeswa, iPhones dzichaenderera mberi nekukunda, uye hazvingareve kupera kweMacs kana chero chimwe chigadzirwa. Vamwe vashandisi vanongoda kushanda paIpad uye voishandisa uye vamwe, nekuda kwezvaunoda kana basa, vanosarudza desktop desktop inoshanda. Iva zvazvingaita, iOS uye zvishandiso zvako zvinofanirwa kuvandudza uye kukura. Iyo iPhone yakakwana kwazvo uye hapana zvakawanda zvekuvandudza zvinogona kuitwa pairi, asi iPad ine yakawanda yemusoro wemusoro uye kufamba.
Tichaona muna 2017 izvo zvavanotishamisa nazvo mune ino inonakidza renji. Kana chimwe chinhu chikaitika kana kwete neiyo iPad Air 2 uye kana iOS ichinyatsokura uye ichisiyana zvakanyanya muhurongwa hwepiritsi. Parizvino isu tinoziva chete shanduko idzo Apple yaita muchitoro chayo uye nezvinhu zvaisina kuunza munaGunyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » iPad » Apple inowedzera kugona kweiyo iPad Air 2 uye Mini
Kurumidza kugadzira slideshows neMacOS Sierra Memories
IPhone 7 wallpapers ndeyekugunun'una kune yekutanga iMac